Tsuro naGudo Part 1 – magwada
Tsuro naGudo Part 1
Posted on October 29, 2013 October 29, 2013 by kennethmagwada
Kare kare zvako, panguva iyo madhongi akanga achine nyanga dzinenge dzenhoro, mbira dzichine miswe inenge yemakwizo uye nzizi dzichaerera dzichikwira mumakomo….pasichigare, kwaiva nevakomana vaviri vainzi Tsuro naGudo. Tsuro aiti sekuru kunaGudo nekuti aiva mwana wehanzvadzi yaGudo. Nemhaka yokuti vakomana ava vaive vakaenzana pazera vaive nehushamwari hwakasimba, hwebhande nebhurugwa chaiwo. Mushure mekunge vatiza nzara yechigochamazizi kwavaigara, Tsuro naGudo vakavaka dumba ravo nechemusango ndokugara zvavo.
Mazuva okutanga vakomana ava vaipona nezvaibiwa naGudo muminda yavanhu uyu Tsuro basa rake riri rapamoto.
Sekuru Gudo, hanzvadzi yavo ndiyo yakabereka Tsuro
Asi somunhu aiva nechipo chekushandisa njere Tsuro akazofunga zano rokuti vawane twunonaka twakaita senyama nemukaka. Mumwe musi akangofumoti kunaGudo, “vasekuru, nhomba yenyamaini zvino yazondigwangurisa. Zvino ndanga ndafunga kuti ndimbonotorera vanhu vari seri kwegomo iro kumambure nyama yavo. Pedzezvo ndinozoda kunokama mombe dzepamusha watakaona nezuro uya nokuti mukaka ndave kuushuva.”
“Wave kupenga here muzukuru kuzotaura uchidaro?” Gudo akadaro ave kunzwira Tsuro tsitsi. “zvauri kutaura izvozvo unozviita maitiroi napamusaka pembwa?”
Tsuro akangoti chete, “ Izvo siyirai kwandiri.” Ndiye kwaku, simu shapu achisiya Gudo akangoti kanhama.
Tsuro wacho: mwana wehanzvadzi yaGudo
Tsuro akabva padumba ravo nenguva dzemadeukazuva dzaaiziva kuti vanhu vomumabure vanenge vodzokera kumusha. Kuzoti ava kuona kuti vanhu vacho avo, Tsuro akafanorara munzira yavo achinyebera kufa. Gare gare akanzwa mombe, dzaiweva sandanga rizere mavhurusaka emidzonga yechimukuyu, dzichiuya. Akangoti nechemumwoyo, “ vadzimu vokwaMagen’a nhasi ndioneiwo.”
Vakomana vaye vachibva kumambure
Sandanga ndiye riye vhu, mombe dzakatungamirirwa nekakomana kane makore gum
i nematatu. Kakomana kaya pakakaona Tsuro kakabva kamisa mombe ndokuti kune wakaive nako, “Mukoma, ndanhonga katsuro aka. Muviri wako uchiri kupisa. Ndinofunga kuti pane akarova netsvimbo ndokubva kazofira pano apa.”
Mukoma wacho akanhonga Tsuro ndokumukanda musandanga. Izvi ndizvo zvakanga zviri kungokwenyerwa mhuno nekasiyanwa naTsuro. Sezvo kwakange kwave nedehwekukwindingwi, Tsuro akakwanisa kudonhedza mavhurusaka enyama mashanu iye ndokuzosvetukirawo pasi pasina ambozviona. Akabva arova bara kunodaidza Gudo kuti amubatsire kutakura mavhurusaka aya.
Gudo akasvikooma mate mukanwa nezvaakaona. “ ko waiwana Seiko nyama yese iyi, nhai muzukuru?” akabvunza atova mubishi rokukakabvurana nomudzonga wengwarati.
“ Zvibhakera vasekuru. Marovero andaita vanhu nhasi akashata. Izvozvi maoko angu arikurwadza nekurova. Ndangomisa mombe ndokutanga kuwatsa kamukokeri kacho zimbama rine maungira. Mwana atadza nekuchema kwese, vasekuru. Kambwa kavanga vainako ndiko kanga koda kuita manyawi ndokubva ndakapa bhutsu imwe chete kakabva kanzwa parere mwoyo.” Ndipo pandati kumukoma wekakomana ikako, “iwe, komhani burutsa mavhurusaka matatu ndiende nawo.” Paada kumboita zvake utsimbwarimbwa ndipo pandamunhamukira ndokumuita zvinorova. Pane kuti aburutse mavhurusaka matatu ndazongoona oburutsa mashanu.”
Gudo akatemdera zvaanga audzwa nomuzukuru wake. Akabva atsidza mumwoyo make achiti, “ ini somunhu mukuru ndinototi ndipfuure paitwa nakazukuru kangu aka.” ……. Ichaenderera mberi(kubva munaRurimi Rwaamai)
Posted in UncategorizedTagged african literature, culture, folktale, gudo, ngano, oral tradition, shona, story-telling, tsuro, zimbabwe6 Comments
← Plight of the girl child
An Unbroken Lineage. the Sentinelese Bloodline is 60,000 Years Long →
6 thoughts on “Tsuro naGudo Part 1”
Thanks man, my granny used to hit me with those, surely Shona culture is rich
kkkk wasarungano here kana kut wasekuru kkk
kare kare madhongi achine nyanga. Great Stuff
can l read in english
lyk it ….cool
thanks gys its a gud story kubva ndafunga gogo chaivo
Of prophecy and politics in Zimbabwe
Tsuro naGudo part 2
Chii chinokonzera kusanduka kwemamiriro ekunze? ( What causes climate change?)
scott on Tsuro naGudo Part 1
grace,mafumhe on Tsuro naGudo Part 1
joel on Tsuro naGudo Part 1
authorkudzai on Tsuro naGudo Part 1
The Most Isolated Pe… on An Unbroken Lineage. the Senti…